कता जाँदैछ इन्जिनियरिङ शिक्षा ? | RevoScience Nepali
कोभिड–१९ विरुद्ध ‘स्पूत्निक-भी’ पहिलो भ्याक्सिन
Home /कता जाँदैछ इन्जिनियरिङ शिक्षा ?
slide imagesSeptember 12, 2016
कता जाँदैछ इन्जिनियरिङ शिक्षा ?
एक्काइसौं शताब्दीका इन्जिनियरमा समय सुहाउँदो प्राविधिक र व्यावहारिक ज्ञान हुनु आवश्यक छ । यसैले इन्जिनियरिङ शिक्षालाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ ।
–लक्ष्मण डंगोल |
इन्जिनियरका लागि सैद्घान्तिक तथा विशिष्ट प्राविधिक ज्ञान आवश्यक रहे पनि नेपालका इन्जिनियरमा यो ‘गुण’ खस्कँदै गएको छ । यहाँको इन्जिनियरिङ शिक्षा प्रणाली पुरानै ढर्राबाट सञ्चालन हुँदै गएकोले यो अवस्था निम्तिएको हो ।
पूर्वाधार विकासका विज्ञ इन्जिनियर सूर्यराज आचार्य एक्काइसौं शताब्दीको इन्जिनियरमा समय सुहाउँदो प्राविधिक ज्ञान हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘यस्तो दक्षता नभए नाम मात्रको इन्जिनियर होइन्छ, त्यसैले पठनपाठनलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्दै जानु आवश्यक छ,’ आचार्य भन्छन् । सरकारले इन्जिनियरिङ शिक्षालाई समय सुहाउँदो बनाउनुपर्ने उनको विचार छ । पछिल्लो समयमा सरकारी तथा निजी इन्जिनियरिङ कलेजले यो विषय पढाउँदै आए पनि यसलाई प्राविधिक ज्ञानको कसीमा नाप्न सकिएको छैन ।
इन्जिनियरिङ पढाइ पूरा गरिसकेर पनि विषयगत दक्षता हासिल गर्न नसक्नुमा यहाँको पुरातन शैलीको पठनपाठन शैली कारक रहेको छ । ‘यहाँका कलेजमा इन्जिनियरिङ पढाउने अल्पव्यवस्था छ, पठनपाठनमा देखिएका समस्या निराकरण गर्दै यसलाई व्यावहारिक र जीवनोपयोगी बनाउनेतर्फ ध्यान जान सकेको छैन,’ आचार्य भन्छन् ।
एकातिर, राज्यले इन्जिनियनियरिङ शिक्षालाई प्रभावकारी तथा प्रविधियुक्त बनाउनका लागि उचित वातावरण बनाउन सकेको छैन । अर्कातिर, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कलेजले सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद त्यसतर्फ काम कदम चाल्न सकेका छैनन् । इन्जिनियरिङ शिक्षाको समस्याप्रति अनभिज्ञता प्रकट गर्ने स्थिति रहेको छ । ‘विद्यार्थीलाई समय सुहाउँदो शिक्षा दिन नसक्नु धोका हो, सरकार र विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन् । इन्जिनियरिङको पाठ्यक्रम समयअनुसार परिमार्जन हुन नसक्दा सिकाइमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने उनको धारणा छ ।
वर्षौ पुरानो पाठ्यक्रम
मुलुकको सबैभन्दा पुरानो त्रिभुवन विश्विद्यालय मातहतका इन्जिनियरिङ कलेजमा २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि उही पाठ्यक्रममा आधारित विषयवस्तुको पढाइ हुँदै आएको छ । त्यसपछि खुलेका पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङको पाठ्यक्रममा केही परिमार्जन गर्न खोजे पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पोखरा र पूर्वाञ्चलको सम्बन्धनमा सञ्चालित इन्जिनियरिङ कलेजमा विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य भए पनि नयाँ पद्धतिमा पढाइ भएको पाइँदैन । ती कलेज पनि सुगा रटाइको सैद्धान्तिक शिक्षाबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् ।
ई. सूर्यराज आचार्य, विज्ञ, पूर्वाधार विकास
‘इन्जिनियरिङको पाठ्यक्रम त्रुटिपूर्ण छ’
स्कुले शिक्षामा जुन खालका समस्या छ, इन्जिनियरिङमा पनि त्यही बेथिति छ । समयमै सुधान नगर्ने हो भने कमसल इन्जिनियर उत्पादन हुने स्थिति छ । अहिले इन्जिनियरिङ कलेजको पढाइबाट विद्यार्थीले १५–२० प्रतिशतभन्दा बढी ज्ञान हासिल गर्न सक्दैनन् । विद्यार्थीले आफ्नो ढंगबाट सिकाइमा जसरी वृद्धि गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । धन्न, पुल्चोक क्याम्पसका विद्यार्थी ए ग्रेडका भएर मात्र यो शिक्षाको इज्जत धानिएको छ ।
इन्जिनियरलाई किताबी ज्ञानदेखि समाजका गतिविधि पनि थाहा हुनुपर्छ । पूर्वाधार‚ हाइड्रोपावर‚ मेकानिक्सका सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने ज्ञान हुनुपर्छ । पहिले इन्जिनियरलाई गणितमा गल्ती नगर्ने मानिस भनेर चिनिन्थ्यो । अहिले गणितको काम क्याल्कुलेटर तथा कम्प्युटरले गर्न थालिसकेको छ । पहिले डिजाइनको काम हातैले गर्नुपथ्र्यो । तर, अहिले त्यो काम कम्प्युटर सफ्टवेयरले गर्छ ।
शिक्षकले आफूले पढेको बेलाको तौरतरिकाबाट इन्जिनियरिङ पाठ्यक्रम पढाउने गरेको पाइन्छ । अहिले सैद्धान्तिकसाथै प्रयोगात्मक शिक्षाको बढी उपयोगिता हुन्छ । इन्जिनियरिङ व्यवहारिक विधा भएकोले यसको काम पनि त्यही अनुसार हुनुपर्दछ । त्यस्ता कुरा हामीले पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्न सकेका छैनौं ।
इन्जिनियरिङको पाठ्यक्रम समयअनुसार सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । त्यो हुन सकेको छैन । अहिले सर्भे गर्ने टेक्निक्स परिवर्तन भैसकेको छ तर, हामीले पुरानै विधि पढाइरहेका छौं । नेपालका इन्जिनियरमा समय सुहाउँदो प्राविधिक ज्ञानको कमी छ ।
इन्जिनियरको राष्ट्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, उनीहरुलाई राम्रोसँग सीप तथा दक्षता हासिल गराएको छैनौं । ज्ञान र सीपमा दक्षता हासिल नगरेका इन्जिनियरले पुनर्निर्माणलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउन सक्दैनन् ।
एउटा इन्जिनियरलाई इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्टदेखि सैद्धान्तिक‚ प्राविधिक‚ प्रशासनिक‚ सञ्चार, वातावरण आदिबारे ज्ञान दिनुपर्छ । तर, कलेजको पढाइ सानो घेरामा सीमित हुन्छ । अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्नसक्ने इन्जिनियरिङ शिक्षाको विकास हुन सकेको छैन । बजारमा कस्तो इन्जिनियरको माग छ, त्यही अनुसार उत्पादन थालनी गर्नुपर्छ ।
शिक्षक‚ विद्यार्थी‚ डिन‚ कर्मचारीमा राजनीतिकरण छ । यसकारण नेपालमा इन्जिनियरिङ क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो छैन । उपकुलपति, डिनदेखि हरेक नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डामा हुन्छ । नेपालका इन्जिनियर कस्ता हुन् भने उनीहरुलाई रेलका कुरा पढाइन्छ तर, कतिपयले रेल देखेको हुँदैनन् । समाजले यो कुरा बुझ्न अझै दशौं वर्ष लाग्छ । यहाँका प्राध्यापक २० वर्षअघि राम्रा र समर्पित भावका थिए । त्यसबेला यस्तोविधि राजनीतिकरण भएको थिएन ।
यो शिक्षामा प्राविधिक पक्षको सिकाइ कमजोर हुँदै गएको छ । पहिले कम्प्युटर थिएन । अहिलेजस्तो प्रविधि थिएन । अहिले इन्टरनेट छ । हरेक कुरा घरमै बसेर थाहा पाउन सकिन्छ । अहिलेका इन्जिनियर पुरानाभन्दा तगडा हुनुपर्ने हो, तर, त्यस्तो पाइँदैन ।
पछिल्लो समयमा इन्जिनियरको संख्या बढ्दै गए पनि त्यसको तुलनामा गुणस्तर वृद्धि हुन सकेको देखिँदैन । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकार र निजी क्षेत्रका कलेजले समन्वयात्मक ढंगले जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो भएको पाइँदैन । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज एशोसिएसनका अध्यक्ष रामेश्वर रिजाल राज्यको निजी कलेजलाई हेर्ने दृष्टिकोण सही नभएको बताउँछन् । ‘पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा पढ्न नपाएका विद्यार्थीले निजी कलेजमा भर्ना पाएर अध्ययन गरिरहेका छन्, यसबाट कम्तीमा देशको पुँजी बाहिर जानबाट रोकिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘निजी कलेजले शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो योगदान पु¥याएका छन् ।’ ंिनजी कलेजले सरकारले बनाएको नीतिनियम पालना गरेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि नियामक निकायले अनावश्यक झमेला थप्ने गरेको आरोप उनले लगाए । ‘हामीले शिक्षा क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको मूल्यांकन गर्नु त परै जाओस्, असजिलो अवस्था खेप्नुपरेको छ,’ उनी थप्छन् ।
इन्जिनियरिङ शिक्षामा आधुनिक प्रविधि अपनाएर पाठ्यक्रमलाई गुणस्तरीय बनाउन थप लगानी आवश्यक पर्छ । यसो गर्दा निजी कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीले अझै रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । ‘शिक्षा प्रणालीमै परिवर्तन गर्ने काममा सरकारले उचित भूमिका खेल्नुपर्छ, खाली निजी कलेजलाई मात्र देखाएर हुँदैन,’ रिजाल भन्छन् ।
इन्जिनियरिङ कलेजको पाठ्यक्रम पुरानो भएकोले यसलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा कलेज सञ्चालक मतैक्य छन् । हिमालयन कलेज अफ इन्जिनियरिङका निर्देशक मनोज थापा विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेर यसलाई अझै व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘पाठ्यक्रम परिमार्जनको कुरा त छँदैछ, शैक्षिक संस्थामा गरिने बन्द–हडताललाई पनि सधैंका लागि निषेध गरिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । नियमित कक्षा सञ्चालन हुन नसकेमा कोर्स पूरा गर्न नसकिने र त्यसले विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धीमा असर पर्ने उनको धारणा छ ।
विद्यार्थीमा नयाँ विषयवस्तुबारे खोजी गर्ने बानी हराउँदै गएको देखिन्छ । पठन सामग्री व्यापक भए पनि अध्ययन गर्ने बानी घट्दै गएको छ । सगरमाथा इन्जनियरिङ कलेजका प्रिन्सिपल रमेश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विद्यार्थीमा जुन प्रकारको आत्मविश्वास हुनुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन । शिक्षकमा परनिर्भर बन्दै जाने बानीको विकास भएको देखिन्छ ।’ पढ्नको लागि सन्दर्भ सामग्रीको कुनै अभाव नरहेको तर विद्यार्थीमा पढ्नुपर्छ तत्परता नेदखिएको केहीको अनुभव छ ।
कतिपय कलेज सञ्चालक पाठ्यक्रम सुधार गरेर विश्व बजारको माग अनुसार इन्जिनियर उत्पादन नगर्ने हो भने समस्या आउनसक्ने तर्क गर्छन् । ‘हामीले नेपालको इन्जिनियरिङ पाठ्यक्रमलाई सुधार नगरिकन यथास्थितिमा चलाउने हो भने यहाँका विद्यार्थी भारतलगायत अन्य मुलुकमा जान सक्छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसै त भारतीय कलेजले नेपाली विद्यार्थीलाई प्रलोभन देखाएर लगिरहेका छन् । झन् समयअनुसार चल्न सकिएन भने अप्ठ्यारो पर्छ ।’
ई. सत्यनारायण साह अध्यक्ष‚ नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्
‘परिषद छ कि छैन जस्तो लाग्छ’
कतिपय अवस्थामा मलाई नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद छ कि छैन जस्तो लाग्छ । परिषदले इन्जिनियरिङ शिक्षालाई उकास्न जसरी काम गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन
संरचना कस्तो बनाउने भन्ने मुख्य जिम्मेवारी इन्जिनियरको हुन्छ । इन्जिनियरिङ संरचनाले सधै शतप्रतिशत काम गर्छ भन्ने हँुदैन किनभने इन्जिनियरले जहिले पनि लागत प्रभावकारिताको हिसाबले संरचनाको डिजाइन गरेको हुन्छ । संरचनालाई कति दरिलो र प्रभावकारी बनाउने भन्ने निर्माणकर्तामा भर पर्छ ।
मानवनिर्मित संरचना आर्थिक हिसाबले किफायती हुनुपर्छ । पहिले मिस्त्रीहरुको भरमा घर बन्ने गरेको पाइन्थ्यो । अहिले पनि ठेकेदारको भरमा घर निर्माण भइरहेका छन् । समाजले इन्जिनियरलाई काम लगाउनुपर्ने हुन्छ । यदि समाजले माग सिर्जना गरेन भने इन्जिनियरले त्यतिकै काम गर्ने भन्ने हुँदैन । मानिसले घर बनाउन करोड खर्च गर्ने भए पनि डिजाइनका बेलामा हजार खर्च गर्न चाहँदैनन् । यो सांस्कारिक दोष हो । जनशक्ति तथा संस्थागत विपद् सामना गर्न हामी तयार हुन सकेनौं ।
भबितव्यलाई कसैले टार्न सकिँदैन । तर, त्यसको न्युनीकरण गर्न सकिन्छ । आगो लागेपछि निभाउने संस्कार मात्र हामीले जानेका छौं तर, हामी पूर्वसावधानी अपनाउँदैनौं । सडक इन्जिनियरिङको कुरा नमिल्दा दुर्घटना हुन्छ । गाडीको क्षमताबारे बेवास्ता गर्दा नेपालमा दैनिक सरदर ५ जनाको मृत्यु हुन्छ ।
कलेजको गुणस्तरको कुरा गर्दा त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिले कस्तो काम गरेका छन् भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । परिषद‚ शिक्षा मन्त्रालय‚ विश्विद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले इन्जिनियरिङ शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । गुणस्तरीय इन्जिनियरिङ जनशक्ति उत्पादन अहिलेको आवश्यकता हो । यदि कलेजले कमसल जनशक्ति उत्पादन ग¥यो भने तिनीहरुले रोजगारी पाउन गाह्रो हुन्छ र यस क्षेत्रमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै जान्छ । यसतर्फ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले कलेजको आधारभूत संरचनादेखि लाइब्रेरी‚ प्रयोगशाला, शिक्षक फ्याकल्टीको अनुगमन गर्छ । कलेजको कमीकमजोरी देखिएमा लिखित पत्राचारमार्फत सुधारका लागि आग्रह गर्छौ । कतिपय कलेजलाई त्यतिले मात्र पनि पुग्दो रहेनछ, नियमअनुसार अन्य कदम पनि चाल्नुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ ।
संस्थागत रुपमा नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षालाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । सरकारी निकायले इन्जिनियरिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाको विकासका लागि वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । सरकारी निकायले त्यस्तो काम गर्न सकेको छैन ।
परिषदमा दर्ता भएका इन्जिनियरले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेकोबारे व्यापक चर्चा चलेको छ । अख्तियारले यसको छानबिन गरिरहेको छ । उनीहरुविरुद्घ अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
अहिले परिषदले विश्वविद्यालयले दिएका प्रमाणपत्रको आधारमा इन्जिनियरको दर्ता गरिरहेको छ । त्यसैले गर्दा गुणस्तरीय इन्जिनियर छान्न कठिन भएको छ । अब ऐन संशोधन भएपछि परीक्षा लिएर मात्र उनीहरुको दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । त्यो कामका लागि नियमावली परिवर्तन हुनुपर्दछ । त्यो हुन सकेको छैन ।
यसो हेर्छु, कतिपय अवस्थामा मलाई नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद छ कि छैन जस्तो लाग्छ । परिषदले इन्जिनियरिङ शिक्षालाई उकास्न जसरी काम गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । इन्जिनियरिङ सम्बन्धी केही ऐन २०५५ को समसामयिक प्रस्ताव यसअघि मन्त्रालय पठाए पनि फिर्ता आयो । फेरि साढे एक वर्षअघि उक्त प्रस्ताव पठाए पनि त्यसमाथि कुनै कारबाही भएको छैन ।
विकास र इन्जिनियर
दक्ष इन्जिनियरबिना मुलुकले विकासको क्षेत्रमा फड्को मार्न सक्दैन । विश्वका हरेक देशमा इन्जिनियरिङको प्रभावकारिता उस्तै छ । पहिले सिभिल इन्जिनियरको खुबै चर्चा चल्ने गरे पनि अहिले इलेक्ट्रोनिक्स‚ आर्किटेक्चर‚ मेकानिकल‚ एरोनोटिकल र बायोमेडिकल इन्जिनियरको चर्चा चल्ने गरेको छ । नेपालमा भने सिभिल इन्जिनियरबाहेक अन्य इन्जिनियरको चर्चा कम छ । नेपालमा जुन रुपमा औद्योगिक विकास हुनुपर्ने हो, त्यसअनुसार नभएकोले समग्रमा इन्जिनियरिङ क्षेत्र प्रभावित बन्ने गरेको छ ।
उत्पादित इन्जिनियरमा जस्तो खालको आत्मविश्वास र दक्षता नभएकाले प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्न गाह्रो हुन्छ । सीमित संख्यामा रोजगारीको सम्भावना भएकाले इलक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरले योग्यता अनुसार काम पाउन सकेका छैनन् । नयाँ विधाको रुपमा भित्रिएको बायोमेडिकल इन्जिनियरिङको भने ‘स्कोप’ बढ्दै गएको कलेज अफ बायोमेडिकल इन्जिनियरिङका प्रिन्सिपल डा. विश्वप्रकाश श्रीवास्तव बताउँछन् । ‘कलेजबाट उत्पादित बायोमेडिकल इन्जिनियर अस्पतालमा खपत हुन थालेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले सय बेड क्षमताको अस्पतालमा एक बायोमेडिकल इन्जिनियर राख्नुपर्ने नीति बनाएपछि माग बढेको छ ।’ त्यसबाहेक निजी अस्पतालमा पनि बायोमेडिकल इन्जिनियरले काम गरिरहेका छन् ।
दक्ष जनशक्ति खाँचो
इन्जिनियरिङमा विद्यार्थीले भौतिकशास्त्र‚ रसायनशास्त्र‚ गणित‚ वातावरण विज्ञान‚ मेकानिक्सलगायत विषय पढ्नुपर्छ । यी विषय पढाउनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको कलेज सञ्चालकको भनाइ छ । युनिभर्सल इन्जिनियरिङ साइन्स कलेजका प्रबन्ध निर्देशक रामचन्द्र कँडेल भन्छन्, ‘पुल्चोक क्याम्पसमा अनुभवी प्राध्यापक छन्, त्यसबाहेक अन्य कलेजमा पढाउने शिक्षक उस्तै–उस्तै स्तरका छन् ।’ भर्खर पढाइ पूरा गरेका आएका शिक्षकमा जोस र जाँगर हुने भएकाले उनीहरुलाई सिक्ने वातावरण उपलब्ध गराइदिनुपर्ने पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका प्रमुख प्रा.डा. गोकर्णबहादुर मोर्टाको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘नयाँ शिक्षकलाई सिक्ने अवसर दिनुपर्ने हुन्छ । कतिपय शिक्षक पुल्चोक क्याम्पसमा केही वर्ष पढाउँछन् । विदेश गएर राम्रो सेवा–सुविधा पाएपछि उतै बस्छन् ।’
नेपालमा सबै विषय पढाउनको लागि पर्याप्त जनशक्ति नभएको कलेज अफ बायोमेडिकल इन्जिनियरिङका प्रिन्सिपल श्रीवास्तव बताउँछन् । ‘हामीले कलेजमा ‘बायोमेकानिक्स’ पढाउने शिक्षक चाहियो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै भ्याकेन्सी खोल्यौं । पछि अमेरिकाबाट उक्त विषय पढेर फर्किएका नेपालीले आवेदन दिए, त्यही भएर सजिलो भयो,’ उनी भन्छन् ।
ई. रामेश्वर रिजाल
अध्यक्ष, एशोसियन अफ इन्जिनियरिङ कलेज नेपाल (एकोन)
‘इन्जिनियरिङ कलेज सकसमा छन्’
इन्जिनियरिङ कलेजलाई एउटै निकायले नियमन गर्नुपर्छ । यसका लागि विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, इन्जिनियरिङ परिषद्को एउटा उच्स्तरीय टिम बन्नुपर्छ । अहिले केवल विधि पु¥याउने खालको निगरानी छ । यसका लागि ‘क्वालिटी अडिट’ प्रक्रियामा जानुपर्छ ।
संख्या बढेको बढ्यै
पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजले हरेक वर्ष १ हजार ७ सय ४६ विद्यार्थी भर्ना लिन्छ । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएका कलेजको संख्या ४९ छ । ती कलेजबाट वार्षिक ८ हजार ३ सय ७० इन्जिनियर उत्पादन हुन्छन् । त्यसबाहेक विदेशबाट इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर आउने संख्या छुट्टै हुन्छ । अहिलेसम्म परिषदमा दर्ता भएका महिला तथा पुरुष इन्जिनियरको संख्या ३३ हजार ४ सय ८६ छ ।
नेपालमा १६ विधामा इन्जिनियरिङको पढाइ भए पनि इन्जिनियरिङ परिषदमा ४६ विधाका इन्जिनियर दर्ता भएका छन् । कतिपयले विदेशबाट नयाँ विषय पढेर आएका हुन् । उनीहरु सबैले नेपालमै बसेर काम गरिरहेका छन् ।
भूकम्पपछि इन्जिनियरको काँधमा अझै चुनौती थपिएको छ । विकासको संरचना तयार पार्दा त्यसलाई कसरी भूकम्पप्रतिरोधी बनाउने भन्नेमा ख्याल गर्नुपर्छ । जस्तैः २०७२ वैशाख ११ को भूकम्पका बेला कुलेखानीको ड्याम फुटेपछि विद्युत अवरुद्घ भएको थियो । निर्माण भएका संरचनालाई कसरी दिगो बनाउने भन्ने दायित्व इन्जिनियरको रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदका अध्यक्ष सत्यनारायण साह बताउँछन् ।
पछिल्लो समय इन्जिनियरको संख्या बढेसँगै गुणस्तरको बारेमा विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका बेला परीक्षा लिएर मात्र प्रमाणपत्र दिनुपर्ने कुरा उठिरहेको छ । तर, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले परीक्षाको व्यवस्था गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नका लागि प्रस्ताव मन्त्रालय पठाएको डेढ वर्षभन्दा बढी समय बिते पनि काम अगाडि बढेको छैन । ‘कतिपय अवस्थामा मलाई परिषद नै छ कि छैन जस्तो लाग्छ, यसले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको छैन,’ अध्यक्ष साह भन्छन् । इन्जिनियरलाई पेशाप्रति मर्यादा बनाउन रोजगारदाताले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । ‘गुणस्तरहीन इन्जिनियरलाई काममा लगाउँदा लगानीकर्ता आफैं समस्या पर्छन् । त्यो पक्षलाई राम्ररी हेर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
स्रोत नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्
इन्जिनियरिङ शिक्षालाई एक्काइसौं शताब्दीको हावापानी सुहाउँदो बनाएर अगाडि बढाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरुको धारणा छ । आवश्यक भौतिक संरचना, योग्य शिक्षक, प्रयोगशाला, फिल्ड वर्कलगायत पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
निजी शिक्षण संस्था कम्पनी ऐनअनुसार चलाउने कि गुठीमा जाने भन्ने द्विविधा रहेको एशोसियन अफ इन्जिनियरिङ कलेज नेपाल (एकोन) का अध्यक्ष ई. रामेश्वर रिजाल बताउँछन् । ‘सरकारले स्पष्ट नीति नल्याउँदा इन्जिनियरिङ कलेजलाई अगाडि बढ्न असहज हुन्छ, निजी शिक्षण संस्थालाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण परिवर्तन हुनु आवश्यक छ,’ उनी भन्छन् । उता, कतिपय निजी इन्जिनियरिङ कलेजले चर्को शुल्क लिए पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेको विद्यार्थीको गुनासो छ ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई दिएको प्रमाणपत्रको आधारमा इन्जिनियरको दर्ता गर्ने प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा अघि सार्दै आएको छ । यसैअनुरुप परिषदले ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयमा पठाए पनि सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाएको छैन । नयाँ नियम तय भएपछि इन्जिनियरले पनि परीक्षा पास गरेर मात्र परिषदबाट दर्ता प्रमाणपत्र पाउँछन् । यसले गुणस्तरीय इन्जिनियर उत्पादनमा सहयोग पुग्ने परिषदको तर्क छ भने कतिपय इन्जिनियर यसबाट झनै झन्झट थपिने मत राख्छन् । यद्यपि, इन्जिनियरिङ शिक्षालाई व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन समयसापेक्ष ऐन–नियम परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन । विश्वका अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाठ्यक्रमदेखि शैक्षिक पद्धतिसम्म परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
इन्जिनियरिङ शिक्षालाई समयअनुकूल बनाउन उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरी नेपाललाई कस्ताखाले इन्जिनियर चाहिएको हो, त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । निजी कलेज पढेर औसत ज्ञान र सीप सिकेका इन्जिनियरलाई तालिमको व्यवस्था गरेर दक्ष बनाउन सकिने विज्ञहरुको भनाइ छ । कुनै ठेकदार वा मिस्त्रीले बनाएको संरचनाभन्दा इन्जिनियरिङ तयार गरेको संरचना राम्रो र दरिलो हुनुपर्ने इन्जिनियर आचार्यको धारणा छ । उनी भन्छन्, ‘उचित वातावरण र राम्रो अवसर पाएमा नेपालका इन्जिनियरले धेरै राम्रो काम गर्न सक्छन् ।’
स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरुको छैटौं शिखर सम्मलेन…
नास्टले पहिलो पटक सार्वजनिक गर्यो…
नेपालमै प्राचीन धूप घडि बन्यो,…
करीब ४ दशक अघि नेपालमा भित्रिएको टेलिस्कोप
करीब ४ दशक अघि नेपालमा भित्रिएको टेलिस्कोप वाल्मीकि विद्यापीठमा सुरक्षित छ ।
Posted by RevoScience Nepali on Sunday, March 8, 2020